राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ? : प्रधानमन्त्री ओली - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ? : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आफूले राजीनामा गर्न नपर्ने बताएका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आफूले राजीनामा दिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था नभएको बताएका छन् । उनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ‘राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ ?